Ọnọdụ mbụ: njirimara, mmalite na mmalite | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọ bụghị mgbe niile ka ikuku dị gburugburu ụwa anyị nwere otú ọ dị ugbu a. Ebe ọ bụ na mmalite nke e guzobere ụwa anyị na oge gboo ikuku ihe mejupụtara ya agbanweela kemgbe oge dabere na njirimara ụwa na ọnọdụ gburugburu ya. Anyị maara na ikuku abụghị ihe ọ bụla karịa oyi akwa gas nke gbara mbara igwe gburugburu nakwa na ike ndọda na-adọta ha n'ebe ọ nọ. Ha na-enyere anyị aka ichebe onwe anyị pụọ na radieshon nke ultraviolet, na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ ma gbochie meteorites ịbanye na ụwa anyị.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ikuku oge ochie na otu esi kee ya.
1 Oge ikuku
3 Okike nke ikuku oge ochie
4 Mgbanwe ndị mejupụtara
Anyị na-ekwu maka otu gas dị gburugburu ụwa anyị gbara gburugburu ebe ike ndọda dọtara ha. Ọ bụ oyi akwa gas na ọ na-echebe anyị site na anyanwụ na ọ bụrụ na enweghị ya ndụ agaghị enwe mmepe ka anyị si mara ya. Na mbara ụwa anyị, ikuku nwere nitrogen, carbon dioxide, oxygen na argon ugbu a. Ruo n'ókè dị nta, ọ bụ mmiri mejupụtara ya, nke bụ ihe na-eme igwe ojii, na ogige ndị ọzọ dị ka uzuzu, pollen, nri ikuku na ikuku combustion. Anyị maara na ikuku anyị karịrị gas, ájá, na mmiri. Ọ bụrụ n ’ikuku a ndụ agaghị adị n’ụwa.
Isi ọrụ bụ iji chebe onwe anyị pụọ na radieshon nke ultraviolet na ịchịkwa okpomọkụ ya. Na mgbakwunye, ọ na-enyere anyị aka igbochi ntinye nke nnukwu meteorites na ụwa anyị. Anyị maara na ọ bụghị mbara ikuku nke mbara ala ndị mejupụtara mbara igwe bụ otu. Enwere ụfọdụ ndị dị omimi karị karịa nke Saturn, nke O nwere kilomita 30.000 site na ntọala ruo na nke ikpeazụ. N’aka nke ọzọ, nke mbara ala anyị pere mpe okpukpu atọ, ọ dị ihe dịka kilomita 10.000 n’omimi.
Eziokwu bụ na ikuku na-akọwa ọtụtụ ọnọdụ elu igwe anyị na-ezute. Ha niile dị iche iche. Igwe anyi nwere 4 di iche. Anyị nwere troposphere nke bara ọgaranya na oxygen, alụlụ mmiri. N’ebe a ka ọtụtụ ihe gbasara ihu igwe anyị matara na-eme, gụnyere mmiri ozuzo, ifufe na snow. Iji ruo ebe a dị elu na njedebe nke troposphere ị chọrọ ụgbọ elu pụrụ iche nke nwere ike iru oke dị elu.
A maara nke abụọ nke ikuku dị ka stratosphere. Ọ bụ ebe kpọrọ nkụ ebe ọ na-enweghị ihe ọ bụla gbasara meteorology. Planesgbọ elu ndị ahụ enweghị ike ịba ebe ọ bụ na ikuku adịghị ezu ịkwado ha. Agbanyeghị, balloons ikuku na-ekpo ọkụ nwere ike ịbịa. Ndị na-esochi ha bụ mesosphere. Ọ bụ akwa nke kpakpando ndị na-agbapụ na-agafe. Mgbe anyị chọrọ ịhụ ndị ahụ a na-achụ nta, anyị kwesịrị ịmata na ha na-agabiga na mbara ala. Ha bụ meteoroid nke kewara na njedebe nke ikuku ma gafere ebe a.
The thermosphere bụ penultimate oyi akwa nke'swa ikuku na nke Northern ọkụ na-eme na shuttles orbit. N'ikpeazụ, enwere ohere. Ọ bụ otu, ya na usoro ndị ọzọ, na-echebe ndụ ụwa oge niile. Isi ọrụ ya nke ichebe onwe anyị pụọ na ụzarị gamma nke na-esi n’anyanwụ.
Okike nke ikuku oge ochie
Oge gboo e kere ya ihe dika ijeri afo 4.500 gara aga. Enwere ike ịkekọrịta usoro nke ikuku nke oge ochie na usoro 4. Ihe mbu kwesiri iburu n'uche bu na obughi ebe di nma ka eji guzobe ndu. Ourwa anyị enweghị ezigbo ebe maka mmepe ndụ. 4.500wa XNUMX gara aga bụ ụwa na-arụsi ọrụ ike na mbara ala. Enwere nnukwu ugwu mgbawa na-achịkwa ikuku nke oge ochie. Ihe mejupụtara ikuku a bụ vepo mmiri, carbon dioxide, sọlfọ na nitrogen. N’ebe a kpụrụ ikuku gboo, ikuku oxygen adị n’onwe ya na enweghị oke osimiri.
Na ọkwa nke abụọ anyị kpụpụtara anyị na-ahụ na, ka mbara ala jụrụ oyi, alụlụ mmiri nwere ike ịkọkọ ma kọọrọ oke osimiri ebe ọ bụ na mmiri zoro ruo ogologo oge. Ka mmiri ahụ na-ada, carbon dioxide na-emeghachi omume na nkume ndị dị n'ime ala iji mepụta carbonates. A carbonates ndị a dị mkpa maka e guzobere ndụ na maka oké osimiri ka nnu dị ka ọ dị taa.
Agba nke atọ na-ewere ọnọdụ ihe dịka ijeri afọ 3.500 gara aga. Nke a bụ ebe nje bacteria na-apụta, ha nwere ike nke photosynthesis. Na-ekwu, nje ndị a nwere ike ịmepụta oxygen. Nmepụta a nke oxygen mere ka mmepe nke ndụ dịrị na gburugburu mmiri. Ozugbo ikuku ahụ nwere oxygen zuru ezu, usoro nke anọ amalite. N'oge a, anyị na-ahụ ikuku na ọtụtụ ndị mgbanwe gburugburu ebe obibi bụ ndị na-ahụ maka ịmepụta ọnọdụ ndị dị mkpa maka mgbanwe nke nnukwu ihe dị ndụ. Site na ntoputa nile a, anumanu anumanu nke nwere iku ume.
Mgbanwe ndị mejupụtara
Ihe dị iche iche sitere na gboo gboo ruo ọchịchị na mbara ụwa anyị dabere na oge ọmụmụ anyị nọ na ya. Anyị na-ekwu maka ihe ndị mejupụtara nke na-adịgasị iche n'etiti ikuku na ibelata pasent oxygen dị ka nke ikuku ndị ọzọ. Nitrogen dị mgbe niile ebe ọ bụ gas nke a na-ewere dị ka ihe na-adịghị arụ ọrụ ebe ọ naghị emeghachi omume ma ọ bụ na-esiri ya ike imeghachi omume.
N'ụzọ dị otú a, anyị na-achịkwa iru ikuku nke ugbu a nke nwere gas ndị emere na nke ọ bụla gara aga nke anyị tụlere. Ikuku ndị a na mmiri ozuzo na-eme ka gas ndị a na-aga n'ihu na-aga n'ihu. Igwe akụrụngwa nke ikuku bụ ụzarị anyanwụ nke na-esi n'anyanwụ na-akpata mgbanwe na njupụta ha. N'ihi ike ikuku a, ụmụ mmadụ na ihe ndị ọzọ dị ndụ nwere ike iku ume. Ewepu ikuku ndị a agaraghị adị ndụ na mbara ụwa.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ikuku oge ochie na nhazi ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oge ikuku